Iyo yazvino beta vhezheni yeApple Music yeApple inosanganisira kutsigira Android Auto | IPhone nhau
Iyo yazvino beta vhezheni yeApple Music yeApple inosanganisira kutsigira kweAuto Auto
Zvinotaridza kuti avo vashandisi vane Android Auto vanogona kukurumidza kuwana rutsigiro rweApple Music, uye ndeye iyo yazvino beta vhezheni yechishandiso Android 2.6.0 inosanganisira kutsigira kekutanga. Mune ino kesi, kuwana iyo beta vhezheni iyo inogona kuwanikwa muGoogle Mapoka inodiwa, asi inhau dzakanaka kune avo vashandisi vasina mamwe mapuratifomu emimhanzi pamusika uripo kana vanongoda Apple Music.
Zvinotaridza kunge zvisinganzwisisike kwatiri kuti vashandisi veApple vanoda kushandisa Apple Music kuteerera mimhanzi mukutenderera, asi isu hatigone kuti hapana vashandisi vanoverengeka vanoishandisa nechimwe chikonzero kana chimwe. Mapurisa eApple, anga ari mutariri wekuratidza mushumo mauri Android Auto seinowanikwa muApple Music yeApple.
Nhanho diki inoita kuti zvive nyore kushandisa Apple Music pane Android Auto
Nayo iyi beta nyowani, chii chiri pakupedzisira kuyedzwa ndiko kushanda chaiko kweApple zvishandiso pamwe nekushandisa Apple Music pane dashboard yemotokari ine Android Auto. Izvo hazviratidzike sechimwe chinhu chakaoma kuita, asi ichokwadi kuti yanga iri nguva yakareba kusvika yasvika zviri pamutemo uye haisi yepamutemo kana, nekuti iri beta vhezheni.
Chero zvazvingaitika, sezvatakambotaura pakutanga, zvakajairika kuti vashandisi veApple vashandise Spotify, Youtube Music kana zvakafanana, asi avo vanoshandisa Apple Music yeApple vanogona zvakare kunakirwa nezvakanaka zvekuishandisa mumota. Zuva chairo rekuburitsa zviri pamutemo ichi harizivikanwe, kunyangwe tiine beta vhezheni iripo isu tisingatende kuti zvinotora nguva yakareba kuti ivhurwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Iyo yazvino beta vhezheni yeApple Music yeApple inosanganisira kutsigira kweAuto Auto
Mashandiro anoita CarPlay muIOS 12
Kuonekana ne 3D Kubata mu2019, uye hapana Apple Penzura ye iPhone gore rino